AHOANA NO HANAMARINA NY SSD AMIN'NY FAHADISOANA, NY SATA MIFEHY AZY ARY NY TOETRA SMART - WINDOWS - 2019
Ahoana no hanamarina ny SSD amin'ny fahadisoana, ny sata mifehy azy ary ny toetra SMART
Ny fijerena SSDs ho an'ny fahadisoana dia tsy mitovy amin'ny fitsapana mitovy amin'ny fiarakodia henjana mahazatra ary maro amin'ireo fitaovana ampiasainao dia tsy hiasa eto amin'ny ankapobeny noho ny toetra mampiavaka ny fiasan'ny solosaina.
Ity boky ity dia manoritsoritra amin'ny antsipiriany ny fomba fijerena ny SSD noho ny fahadisoana, mamantatra ny satany amin'ny fampiasana ny teknolojia S.M.A.R.T. ho an'ny tenany, ary koa ny fahitana ny tsy fahombiazan'ilay rakitra, izay mety ilaina. Mety ho mahaliana ihany koa: Ahoana no fijerena ny haingan'ny SSD.
Fenitra fantsona fanina namboarina Windows ampiasaina amin'ny SSD
Fandaharana fanamarinana SSD sy fandalinana
Windows 10, 8.1 ary Windows 7 disk dia manamarina ny fitaovana ampiasaina
Voalohany, momba ireo fitaovana fanandramana sy famaritana ireo rindrambaiko Windows izay azo ampiharina amin'ny SSD. Voalohany indrindra, dia momba ny CHKDSK. Maro ny olona mampiasa io fitaovana io mba hanamarinana ordinatera sarotra, nefa azo ampiharina amin'ny SSD?
Amin'ny tranga sasany, raha toa ka misy olana momba ny asan'ny solosaina finday: ny fihetsika hafahafa rehefa mifandray amin'ny lahatahiry sy antontan-taratasy, ny rafitra "RAW" RAW fa tsy ny fiasan'ny SSD, dia azonao ampiasaina ny chkdsk ary mety hahomby izany. Ny làlana ho an'ireo izay tsy mahazatra azy ireo dia izao manaraka izao:
Manaova baikon'ny baiko ho mpitantana.
Ampidiro ny baiko chkdsk C: / f ary tsindrio ny Enter.
Ao amin'ny baiko etsy ambony, ny taratasin'ny fiara (amin'ny ohatra - C) dia mety hosoloina hafa.
Rehefa vita ny fanamarinana dia hahazo tatitra momba ny fandrakofam-pehezan'ny finday tranainy ianao.
Inona no miavaka amin'ny fanamarinana SSD raha oharina amin'ny HDD? Amin'izany dia mikaroka ireo sekta ratsy miaraka amin'ny fanampian'ny parameter fanampiny, toy ny ao amin'ny baiko chkdsk C: / f / r Tsy ilaina ny manao na inona na inona tsy misy dikany: ny tompon'andraikitra SSD dia tafiditra amin'izany ary manavao ireo sekta ihany koa. Toy izany koa, tsy tokony "hikaroka sy hanamboatra bloogy amin'ny SSD" ianao amin'ny fampiasana fitaovana toy ny Victoria HDD.
Windows koa dia manome fitaovana tsotra ahafahana manamarina ny sata mifehy (anisan'izany ny SSD) mifototra amin'ny data samirery momba ny Diagnostics SMART: manantona baikon'ny baiko ary midira ny baiko wmic diskdrive mahazo sata
Noho ny famonoana azy dia hahazo hafatra momba ny sata mifehy ny fifandraisana rehetra ianao. Raha, araka ny Windows (izay miorina amin'ny alàlan'ny data SMART), ny zavatra rehetra dia amidy, OK dia haseho ho an'ny disk.
Fandaharam-potoana amin'ny fanamarinana SSD ho an'ny diso sy fandinihana ny sata
Ny fanamarinana diso sy ny sata mifehy SSD dia natao noho ny S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, ary Reporting Technology, tamin'ny voalohany dia niseho ho an'ny HDD ny teknolojia, izay ampiasaina ankehitriny). Ny tsipika ambany dia ny kaontin'ny raki-peo dia mandefa rakitra momba ny sata, ny fahadisoana izay nitranga ary ny vaovao hafa momba ny serivisy izay afaka manamarina ny SSD.
Misy fandaharana maro maimaim-poana amin'ny famakiana ireo toetra SMART, saingy mety ho tratry ny olana sasany ny mpisera vaovao iray rehefa miezaka mamantatra ny toetra maha-tsirairay azy, ary koa ny sasany:
Ny mpampiasa isan-karazany dia mety mampiasa ny toetra samihafa SMART. Ny sasany amin'izy ireo dia tsy voafaritra mazava ho an'ny SSD avy amin'ny mpamokatra hafa.
Na dia eo aza ny fahafahanao mahafantatra tsara ny lisitra sy ny fanazavana momba ny toetra "fototra" an'ny S.M.A.R.T. Ao amin'ny loharano isan-karazany, ohatra ao amin'ny Wikipedia: //ru.wikipedia.org/wiki/SMART, na izany aza, ireo toetra ireo dia voarakitra an-tsoratra hafa sy am-pandinihan'ny mpamokatra isan-karazany: ho an'ny iray, marobe ny hadisoana amin'ny sehatra iray manokana dia mety hidika olana amin'ny SSD, Ho an'ny iray hafa, endri-tsarobidin'ny karazan-dahatsary izay voasoratra ao.
Ny vokatry ny fehintsoratra teo aloha dia ny fandaharan'asa "universal" sasany hijerena ny toerana misy ny disks, indrindra ireo izay tsy navaozina nandritra ny fotoana lava na natao ho an'ny HDD amin'ny ankapobeny, dia mety hampita anao amin'ny fomba tsy marina ny fanjakana SSD. Ohatra, mora ny mahazo fampitandremana momba ny olana tsy misy ao amin'ny programa toy ny Acronis Drive Monitor na HDDScan.
Famakiana tsy miankina ny toetra S.M.A.R.T. Raha tsy fantatrao ny fepetra napetrak'ilay mpanamboatra, dia tsy dia mahazatra loatra ny mpampiasa tsotra manao sary marina momba ny fanjakan'ny SSD, ary noho izany dia ampiasaina eto ny programa fahatelo izay azo zaraina ho sokajy roa tsotra:
CrystalDiskInfo - ny fitaovana manerantany malaza indrindra manerantany, mandika tsy tapaka sy mandika tsara ny toetra amam-panahy an'ny SMART amin'ireo SSD malaza indrindra, ka manaitra ny fampahalalana avy amin'ny mpamokatra.
Software ho an'ny SSD avy amin'ny mpamokatra - amin'ny famaritana azy, dia fantany daholo ny hafetsen'ny toetra ambaran'ny SMART mpamily fiara matanjaka amin'ny mpamorona iray manokana ary afaka mamerina manitsy ny toeran'ny rakitra.
Raha olon-tsotra iray izay mila mijery vaovao momba ny loharanom-pahefana SSD ianao, dia tsara ny fepetra, ary raha ilaina dia manatsara ny asany izany - Manoro hevitra aho mba hifantoka amin'ny zava-bitan'ny mpamokatra izay afaka maimaim-poana maimaim-poana foana Ny tranonkala ofisialy (matetika - ny vokatra voalohany amin'ny fikarohana ny fangatahana amin'ny anaran'ny zavatra ilaina).
Samsung magician - Ho an'ny Samsung SSD, dia maneho ny satan'ny rakitra miorina amin'ny data SMART, ny isan'ireo rakitra voarakitra TBW, ahafahanao mijery ireo toetra mivantana, manangana ny rakitra sy ny rafitra, manavao ny firmware.
Intel SSD Toolbox - ahafahanao mamantatra ny SSD amin'ny Intel, mijery ny antontan-kevitra momba ny status ary manatsara. Ny sarintany fanendry SMART dia misy ihany koa ho an'ny antoko fahatelo.
Kingston SSD Manager - fampahalalana mikasika ny fepetra ara-teknika amin'ny SSD, ny loharanom-panaovana sisa amin'ny isan-isan-karazany.
Mpitantana fitahirizana tena izy - manombana ny fanjakana ho an'ny SSDs sy mpamorona hafa. Ireo singa fanampiny dia tsy misy afa-tsy amin'ny fampisehoana marika ihany.
Toshiba / OCZ SSD Utility - jereo ny sata, ny fikandrana ary ny fikojakojana. Mampiseho solonanarana marika fotsiny ihany.
ADATA SSD Toolbox - mampiseho ny lahatahiry rehetra, fa ny angon-drakitra marina momba ny fanjakana, anisan'izany ny fiainam-piantsoana sisa, ny habetsahan'ny rakitra voarakitra, mamantatra ilay horonam-peo, manatsara ny rafitra hiasa amin'ny SSD.
WD SSD Dashboard - ho an'ny solosaina tandrefana.
SanDisk SSD Dashboard - Fitaovana mitovy amin'ny disk
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ampy ho an'ireo tetik'asa ireo, raha toa ka tsy mikarakara ny famerenana SSD ianao na maniry ny handamina ny sariohatra SMART ianao, dia ny CrystalDiskInfo no safidinao.
Ahoana ny fampiasana CrystalDiskInfo
Azonao atao ny maka ny CrystalDiskInfo amin'ny tranonkalan'ny manam-pahaizana ofisialy //crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ - na dia eo aza ny fandraketana an-tserasera amin'ny teny anglisy (azo jerena ao amin'ny tahiry ZIP ihany koa ny fampitaovana portable), dia ho amin'ny teny Rosiana ny fandaharana (raha tsy mihodina izy io mamelà ny teny ho amin'ny teny rosiana amin'ny fiteny vahiny). Amin'io menio io ihany, dia azonao atao ny mampiseho ny anaran'ny anarana SMART amin'ny teny Anglisy (araka ny asehon'izy ireo amin'ny ankamaroan'ny loharano), ka mamela ny interface interface amin'ny teny rosiana.
Inona ny manaraka? Avy eo dia azonao atao ny mahafantatra ny fomba ambaran'ny programa ny satan'ny SSD (raha misy maro, midira ao amin'ny tontonana ambony CrystalDiskInfo) ary vakio ny toetoetry ny SMART, ny tsirairay amin'izy ireo, ankoatra ny anarana, dia manana colonnes data telo:
Current (Current) - Ny mari-pamantarana ankehitriny an'ny SMART-toetra ao amin'ny SSD dia matetika aseho amin'ny isan-jaton'ny loharano sisa, fa tsy ho an'ny parameter rehetra (ohatra, ny mari-pamantarana hafa dia miseho, mitovy ny toe-javatra dia miaraka amin'ireo toetra diso ECC - amin'ny lafiny, aza mieritreritra raha misy zavatra tsy tianao mifandray amin'ny ECC, matetika amin'ny fandikan-teny diso).
Ratsy indrindra (ratsy indrindra) - ny ratsy indrindra dia voasoratra ho an'ny mari-pamantarana SSD voafaritra ho an'ny mari-pamantarana amin'izao fotoana izao. Matetika no mifanohitra amin'ny ankehitriny.
Tokonam-baravarana (tokonam-baravarana) - ny tokonam-baravaran'ny tsipika fanamarihan-kevitra, izay tokony hanomboka ahazoan'ny olona misalasala ny toetoetrany. Ny lanjan'ny 0 matetika dia manondro ny tsy fisian'ny dingana toy izany.
RAW values - Ny rakitra voatahiry ao amin'ny toetra voafantina, raha alahatra, dia aseho amin'ny hexadecimal notation, saingy azonao atao ny mamadika ny dikan-tsoratra amin'ny "Tools" - "Advanced" - ny "RAW-values" menu. Araka ny voalazan'izy ireo sy ireo fepetra napetraky ny mpanamboatra (afaka manoratra hafa toy izany ny olon-drehetra), dia heverina ny sanda ho an'ny "Current" sy "Columns".
Fa ny fandikana ny isa tsirairay dia mety ho samy hafa amin'ny SSDs, anisan'ireo loharano izay misy amin'ny sarimihetsika samihafa ary mora vakiana amin'ny isan-jato (fa ny tahiry hafa dia mety manana tahiry samihafa amin'ny soatoavin'ny RAW):
Zava-dehibe ny sekera - Ny isan'ireo fametram-bahoaka voakaly, ireo "sakana ratsy", izay noresahina teo am-piandohan'ny lahatsoratra.
Herinandro mahery - Ny ora fiasan'ny SSD amin'ny ora (ao amin'ny RAW-values, miova fo mankany amin'ny endri-tsoratra, matetika ny famantaranandro izay aseho, fa tsy voatery).
Nampiasaina ny tahirin-tsakanana voatokana - ny isan'ireo fitaovana fitehirizana nampiasaina ho an'ny fanodinana.
Fintino ny teboka - Mampiakatra ny isan-jaton'ny sela fahatsiarovan-tena, amin'ny ankapobeny dia mifototra amin'ny isa ny famoaham-peo, fa tsy amin'ny marika SSD.
LBA nosamborina avokoa, Manoratra ny fiainana - ny habetsaky ny rakitra voarakitra (ao amin'ny RAW, ny LBA block, bytes, gigabytes).
CRC Error Count - Hanasongadiko ity singa ity eo anivon'ny hafa, satria miaraka amin'ny solo-tena amin'ny toetra hafa manisa karazana fahadisoana isan-karazany, ity dia mety misy sanda misy. Amin'ny ankapobeny, ny zava-drehetra dia miorina: ireo fotodrafitrasa ireo dia afaka manangona mandritra ny fipoahan'ny herinaratra tampoka sy ny OS. Na izany aza, raha mitombo isa ny isany dia ataovy izay hahazoana antoka fa ny SSD dia mifandray tsara (fifandraisana tsy misy oksidia, fifandraisana maivana, cable tsara).
Raha tsy mazava ny toetra iray, tsy ao Wikipedia (rohy voalaza etsy ambony), andramo fotsiny ny fikarohana ny anarany ao amin'ny Internet: azo inoana fa ho hita ny famaritana azy.
Farany dia misy toro-hevitra iray: rehefa mampiasa SSD mba hitahiry ireo angona manan-danja, dia atokàny any an-toeran-kafa - ao anaty rahona, amin'ny sarety fiara tsy tapaka, diska optika. Mampalahelo anefa fa misy ny olana amin'ny fahombiazana tanteraka tampoka tsy misy soritr'aretina mialoha, raha tokony ho raisina an-tsoratra izany.